2008 July | R Blog..!
Archive for July, 2008	Google Talk Current Music Track Bug Workaround Fix
Author: Rapster88	Categories: Google Talk, Tips Tricks and Tweaks	Tags: Fix, Google Talk, Winamp	Happy Birthday Piyo!
ကျွန်တော်ရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး အန်တီ ပိရိုရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းကို သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ ဒီနေ့ ( ဇူလိုင် ၁၇) မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကို ပြည့်တဲ့ မွေးနေ့လဲတော့ မသိလို့ ကျွန်တော်က ၂၇ နှစ်လို့ အကြမ်းဖြင်း စိတ်ထဲမှာ မှတ်လိုက်ပါတယ်။ (Just kidding.. she’s younger than that ).
Author: Rapster88	Categories: Special Events	Tags: Birthday, Piyo Piyo	Re-Enable Hibernation in Vista
PC ကို Hibernation လုပ်ပြီး ပိတ်တာက သာမာန် start up / shutdown ထက်ပိုပြီးတော့ အချိန်ကုန် သက်သာပါတယ်။ Hibernate လုပ်တယ်ဆိုတာက PC ရဲ့ Memory (RAM) ထဲက contents တွေကို Hard disk လို non-volatile storage ပေါ်ကို စက်မပိတ်ခင်မှာ "hiberfil.sys" ဆိုတဲ့ ဖိုင်ထဲကို ကူးထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ နောက်တစ်ခါ စက်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ အဲဒီ ဖိုင်ထဲက contents တွေကို RAM ပေါ် ပြန်တင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် သာမာန် HDD က boot လုပ်တာထက် ပိုမြန်တာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ Windows Vista မှာ Hibernation ကို enable လုပ်ထားရဲ့သားနဲ့ hibernate လုပ်တဲ့ option ပျောက်နေတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Hibernation file ရှိတဲ့ drive (usually C:) ကို disk clean-up လုပ်မိလို့ hiberfil.sys ပျက်သွားရင် အဲဒီလို ပြဿနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Enable ပြန်လုပ်ရတာလဲ လွယ်ပါတယ်..
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks	Tags: Fix, Hibernation, Windows Vista	Got 15 minutes?
ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်ပိုတွေထဲက ၁၅ မိနစ်လောက် အချိန်ပေးနိုင်ရင် ဒီ site ကို သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Ruby (Programming Language) ကို ၁၅ မိနစ်စာ online ကနေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သင်လို့ရတဲ့ နေရပါ။ Programming အခြေခံ ရှိတဲ့သူ or Programming ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Author: Rapster88	Categories: Useful Websites	Tags: Learn, Ruby	Different Domain Names, One Blog
Author: Rapster88	Categories: Blog	Tags: Domain Names, R Blog	ကျွန်တော်သုံးတဲ့ wp plugins တွေ (၂)
ကျွန်တော်သုံးတဲ့ wp plugins တွေထဲက နောက်ထပ် တစ်ခုကတော့ WP database ကို ပုံမှန် backup လုပ်ပေးမယ့် wp-db-backup ဆိုတဲ့ plugin ပါ။
Author: Rapster88	Categories: Admin, Wordpress, Wordpress Plugins	Tags: Wordpress, Wordpress Plugins	R Blog Ajax Search
Author: Rapster88	Categories: Blog	Tags: Ajax, Blog, Plugin, Search	ကျွန်တော်သုံးတဲ့ wp plugins တွေ (၁)
Wordpress ကို သုံးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲက တစ်ခုကတော့ wordpress မှာ plugins လို့ခေါ်တဲ့ ထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို သုံးလို့ရလို့ပါ။ Plugins တွေ အများကြီးထဲမှာမှ နာမည်ကြီးပြီး အသုံးဝင်တဲ့ (at least for me ) ကျွန်တော် လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ plugins တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကတော့…
Author: Rapster88	Categories: Admin, Wordpress, Wordpress Plugins	Tags: Plugins, Wordpress	Feed Testing
Feedburner ကနေ Feed တွေ အသစ်မတက်လို့ Test လုပ်တာပါ။ Feed ရရင် ဒီ post ကို comment ပေးခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Author: Rapster88	Categories: Test	Tags: Test	Old version softwares
တစ်ခါတစ်လေ software တွေက Old version က new version ထက် ပိုပြီးတော့ သုံးရတာ အဆင်ပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ လိုအပ်ချက်အရ old version ကို ပြန်ပြီးသုံးဖို့ လိုလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် Software တွေက New version ထွက်လာရင် version အဟောင်းကို download ပေးပြီး မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်…
Author: Rapster88	Categories: Useful Website	Tags: Old Version Softwares	Older Entries
Posting tweet...Powered by Twitter ToolsSponsors	Spam Blocked	17,752 spam comments blocked byAkismet